awmifudk&D;,m; or®w Lee Myung-ba &Jh jrefrmEdkifiH ESpf&ufMumc&D; [m 'DaeYpwifrSmjzpfjyD;'Dae h naeydkif;rSm jrefrmor®w OD;odef;pdefeJY awGYqHkzG,f&dSNyD; reufjzefrSmawmha':atmifqef;pkMunfeJYvnf; oD;jcm;awGYqHkr,fvdkY owif;&&Sdygonf/
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတလီမြောင်ဘတ် သည် နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိလာကာ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် သမ္မတအိမ်တော်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ မေ ၁၆ရက် နံနက်တွင်ရန်ကုန်မြို့ ၌လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံ၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။ တောင်ကိုရီးယားသမ္မတလီမြောင်ဘတ်၏ခရီး စဉ်တွင် လုံခြုံရေးကိုအလွန် တင်းကျပ်ထားသည်။
ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များတွင် ဖယောင်းသုတ်ထားသည်ဟု NLDက စွပ်စွဲပြောဆိုမှုကို ကော်မရှင်က ဖော်ထုတ်စစ်ဆေးရာ ဖြစ်စဉ်မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
awmifudk&D;,m;or®w vDaNrmifbwfESifh a':atmifqef;pkMunfwdkUonf Sedona Hotel rif;wkef;cef;rwGif ,aeUeHeuf 10em&D cefUu awGUqHkaqG;aEG;cJhygonf/ aqG;aEG;wmcPav;ygyJ/ or®wt*Fvdyfpum;
Photos from Eleven Media Group
tdEd´,0efBuD;csKyf refrdk[efqif;onf jrefrmEdkifiHodkY arv 28 &ufaeYwGif oHk;&ufMum c&D;pOftjzpf vma&mufvnfywfrnfowif;&&Sdygonf/
လှည်းတန်းတ၀ုိုက်မှာတော့ မီးသတ်ကားသံတွေ ဆူညံနေတာပဲ။ ဘယ်မှာများ မီးလောင်နေပါလိမ့်။ မေးကြ စမ်းကြပါဦး။ (01:50 a.m 18.5.2012)
prf;acsmif; A[dkvrf;ay:u aps;BuD;av .. rBuD;BuD;vrf;wdkU bmwdkU em;u aps;BuD; rD;avmifaew,fvkdU qdkygw,f/
cPcP rD;avmifaewmawG awmfawmqdk;aeNyD. .. NyD;cJhwJh awmifOuvmu aps;BuD;rD;avmifwmuvnf; vloHk;a,muf rD;0if&dIUw,fvkdU aemufqHk;od&Sdxm;ygw,f .. aps;olaps;om;awGawmif ac:,lppfaq;aew,fvkdUawmifod&ygw,f/
စမ်းချောင် ဂွဈေး မှာ မီးတော်တော် လောင်နေပါတယ်အဆင်ပြေရင် ဓါတ်ပုံတင်ပါ့မယ်
အနားတော့ ကပ်လို့ မရပါ
tifwmeuf avQmufxm;wJh E awG H awG 3G awG udk aumif;pGmtoHk;csyg aemifawmf
rD;owform;awG tdyf&mu Edk;vdkU rD;awmfawmf Nidrf;aeygNyD jzpfaMumif;
ဒီနေ.မနက် စင်ကာပူ CNA မှာ မြန်မာနိူင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် နဲ. အမေရိကန်နိူင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟစ်လာရီကလင်တန် တို. သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်နေတာတွေ.လိုက်ရပါတယ်။ အမေရိကန်နိူင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အမေရိကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို မြန်မာနိူင်ငံသို.သွားရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို.တိုက်တွန်းနေတာကြားလိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်နိူင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက do it responsibly လို. တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။
နောက်သတင်းတစ်ခုကတော့ Derek Mitchell ကိုမြန်မာနိူင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ်ခန်.အပ်ဖို. ရွေးချယ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရွေးချယ်မှုအပေါ် အမေရိကန်ဆီးနိတ်လွှတ်တော်ကနေ အတည်ပြုချက်ရယူဖို.လိုတယ်လို.လည်းပြောသွားပါတယ် ။ အတည်ပြုချက်ရပြီးရင်တော့ ၂၂ နှစ်အကြာ သံအမတ်အကြီးအဆင့်မထားရှိခဲ့တဲ့ သံတမန်ဆက်ဆံရေးကို အဆုံးသတ်နိူင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။